Araraotin’ny Manampahefana Mba Hamoretana Fihetsiketsehana Ny Lalàna Nataon’i Hong Kong Hiadiana Amin’ny Heloka Bevava Atao Amin’ny Solosaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2014 16:09 GMT
Fihetsiketsehana tao Hong Kong, Oktobra2014. Sary an'i 香港獨立媒體網, fampiasàna nahazoana alàlana.
Ity lahatsoratra ity dia tamin'ny teny Shinoa no nanoratan'ny Keyboard Warrior azy, vondron'olon-tsotra miaro ny fisokafan'ny aterineto. Tany amboalohany dia navoaka tao amin'ny inmediahk.net, ny 20 Oktobra. Dikanteny amin'ny fiteny Anglisy nataon'i Andy Mok avy ao amin'ny Vondrona Facebook HKDemNow ary navoakan'i Oiwan Lam mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy.
Tanora iray 23 taona mpisera ety anaty aterineto no nosamborina noho ny filazàna azy ho nikotrika hetsi-panoherana tao amin'ny Golden Forum any Hong Kong, iray amin'ireo seha-pifaneraserana anaty aterineto malaza indrindra ao amin'ny tanàna. Lazain'ny polisy fa hanamelohana azy ny “fitsofohana taminà solosaina iray, niaraka tamin'ny eritreritra hanao ratsy,” heloka iray fehezin'ny lalàna toko faha-161 ao amin'ny rijanteny momba ny Famaizana any Hong Kong (mitovitovy amin'ny didy ho an'ny heloka bevava ihany).
Tao amin'ny Golden Forum, nanentana ny hafa mba handray anjara aminà andianà hetsi-panoheraa mifandraika amin'ny Revolisionan'ny Elo ilay tovolahy, ny 17 hatramin'ny 19 Oktobra. Ny alin'ny 18 Oktobra, nisy fifandonana nahery vaika nitranga tao Mongkok, teo amin'ireo polisy sy ny mpanao fihetsiketsehana, naharatràna olona maherin'ny ampolony. Vao maraina be, ny ampitson'io, dia nosamborin'ny polisy tao an-tranony ilay mpisera ety amin'ny aterineto.
Milaza ny dikanteny ofisialy amin'ilay lalàna momba ny Heloka Bevava atao amin'ny Solosaina fa:
(1) na iza na iza olona miditra aminà solosaina iray-
(a) mitetika ny hanao ratsy;
(b) na hevi-dratsy hamitaka;
(c) noho ny fikatsahany tombontsoa ho an'ny tenany manokana na ny hafa; na
(d) miaraka amin'ny fisainana hanimba ny hafa, na izany amin'io fotoana nahafahany niditra io, na amin'ny hoavy, dia efa manao heloka sahady ary mendrika ny hohenjehana araka ny didy famonjàna mandritry ny 5 taona.
Hatramin'ny nanombohan'ny Umbrella Revolution (Revolisionan'ny Elo), efa mihoatra ny ampolony ireo mpisera amin'ny aterineto no nosamborina tao Hong Kong ary nohelohina noho ny “[fitsofohana taminà] solosaina iray, niaraka tamin'ny eritreritra hanao ratsy.” Ny sasany tamin-dry zareo nolazaina fa nandray anjara tamin'ilay antson'ny Anonymous ao Azia [Eng] hanaovana fanafihana DDos (Denial-of-Service attack) amin'ireo tranonkalan'ny governemantan'i Hong Kong.
Ny Toko 1(a) amin'ilay lalàna momba ny heloka atao amin'ny alàlan'ny solosaina no tsy isalasalàna fa ampahany manahiran-tsaina indrindra, izay mihatra amin'ny karazana heloka rehetra. Tamin'ny Aprily 2013, rehefa nohazavain'ny lehiben'ny biraom-piarovana ao Hong Kong, Lai Tung-kwok, tamin'ireo mpikambana ao amin'ny filankevitra mpanao lalàna ny ataony hoe lalàna momba ny heloka atao amin'ny solosaina, nomarihany ny hoe:
Io Toko anton-dresaka io dia natao hanakanana ireo fihetsika mifandray amin'ny “fitsofohana aminà solosaina iray, miaraka amin'ny eritreritra hanao ratsy,” toy ny fanapvana hosoka amin'ny aterineto, ny fijirihana, ny fanaovana heloka bevava hafa amin'ny alàlan'ny fampiasàna solosaina iray.
Araka izany dia azo ampiharina amin'ny heloka rehetra ilay lalàna raha vao tafiditra ao ny fampiasàna solosaina, ary milaza sazy henjana ho an'ireo olona izay mety nampiasa solosaina mba hanatanterahana heloka iray, na dia tsy tena mifamatotra tanteraka amin'ny resaka solosaina aza ny heloka vitany. Tato anatin'ny taona vitsy, toy ny nanararaotra ny fisian'ilay lalàna momba ny heloka atao amn'ny solosaina ny fampiharana lalàna, tamin'ny fampivadiana ireny heloka hafa rehetra ireny amin'ny vesatra “fitsofohana taminà solosaina iray, niaraka tamin'ny eritreritra hanao ratsy” raha vao nisy hoe solosaina nampiasaina tao.
Tranga iray ny (KTCC 4509/2010) fanambaràna hosoka nataonà mpitsabo iray izay nampiasa vaksiny mahazo fanohanana ara-bola. Na dia toa nohelohina noho ny “fampiasàna hosoka” aza ilay mpitsabo, dia niharan'ilay Toko faha-161 ihany ity voampanga. Tamin'ny raharaha (ESCC2491/12), naka saripika-nà vehivavy mpiara-miasa taminy tsy manan-tsiny, teo ampandroana, ilay voampanga. Notahiriziny tany anatin'ny solosaina tany an-tranony ireo saripika. Na dia tsy nanana eritreritra ny hizara azy ireny tamin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika aza izy, voaheloka ihany tamin'ny “fitsofohana taminà solosaina iray, niaraka tamin'ny eritreritra na hevi-dratsy hamitaka”
Raha manana endrika heloka bevava ny raharaha iray, dia tokony ho henjehana araka ny rijanteny momba ny heloka bevava, fa tsy araka ny toko faha-161.
Raha naneho hevitra momba ny fisamborana nanjo vao haingana ireo mpisera amin'ny aterineto noho ny hoe fidirana taminà solosaina “hanao famoriam-bahoaka tsy ara-dalàna”, dia nilaza i Charles Mok, mpanao lalàna ao Hong Kong hoe ninoany fa nisy fanararaotana ny fampiharana ilay lalàna momba ny heloka bevava atao amin'ny alàlan'ny solosaina. “toy ny hoe fitaovana iray azo afindrafindra apetaka amin'ny karazana heloka rehetra ilay izy raha vao hoe nikitika solosaina ny zavatra natao, na nampiasa telefona finday, na fitaovana fakantsary dizitaly.” Nanao antso izy ny amin'ny tokony hitondràna fanitsiana amin'ilay lalàna mba hisorohana ny fanararaotana amin'ny fampiasàna azy.
Teren'ny lalàna ny polisy mba hànana fahazoan-dàlana rehefa haka ny mombamomba ny olona any amin'ireo mpanome tolotra aterineto, na ireo sehatra fifampiresahana ety anaty aterineto alohan'ny hanaovany hetsika fisamborana ireo mpisera ho fampihàrany ny lalànan'ny heloka bevava atao amin'ny solosaina. Araka ny tatitra farany avy amin'ny Transparency navoakan'ny Ivon-toerana Fandalinana ny Media sy ny Asa Fanaovana Gazety ao amin'ny Anjerimanontolon'i Hong Kong, nahavita nanao fitakiana ny mombamomba ireo mpisera efa ho 5.511 ny governemantan'i Hong Kong (fitakiana ny hoe iza no ifandraisan'ireo mpisera, ny adiresy IP, sns), ka 3.846 (70%) tamin'ireo dia fitakiana nataony tamin'ny 2013. Ny ankamaroan'ireny fitakiana ireny dia natao ivelan'ny fitsaràna. Tsy nahazo fampilazana momba ireo fepetran'ny orinasa akory ireo mpisera nampiasa ireny tolotra ireny rehefa notakiana ho fampiharana ilay lalàna ny mombamomba azy ireo.
Niseho masoandro nandritra ny fotoana fametrahana fanontaniana naraham-baliny tao amin'ny Filankevitra Mpanao Lalàna tao HK ireo angon-drakitra etsy ambony ireo. Tsy Tsy namoaka tatitra mangarahara mikasika io ampaham-potoana voalaza io ireo sehatra sy mpanome tolotra aterineto ao an-toerana, no sady tsy nilaza ihany koa na hanao izany na tsia.
Rehefa miatrika ny fampiasàna feno fanararaotana ny lalàna momba ny heloka atao amin'ny solosaina, dia aleon'ireo mpisera anaty aterineto mampiasa ny “zony hangina.” Raha natao hiaro ny tombontsoam-bahoaka ny lalàna iray tahaka itony, mety ho lasa fitaovana hanaovana fanenjehana ara-politika ihany koa izy raha tonga eo an-tànan'ny fitondrana mpamoritra.
Tantaran'ny Hong-kong farany
20 Jona 2014Shina
20 Febroary 2014Shina
09 Novambra 2012Hong Kong (Shina)